ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး နယ်မြေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဒီကနေ့ CRPH ကဖွဲ့လိုက်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးလွင်ကိုလတ်က ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားဝင်မှု၊ ပြည်တွင်း တရားဝင်မှု ရှိထားတာကြောင့် ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်ကပြောပါတယ်။ NUG က ဒီကနေ့လုပ်တဲ့ ပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဗွီအိုအေဝိုင်းတော်သူ မစုမြတ်မွန်က မေးမြန်းခဲ့တာကို နားဆင်ရပါမယ်။
မဆုမြတ်မွန် ။.။ အခု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ လိုက်ပြီဆိုတော့ ဒီအစိုးရ အဓိက ဦးစားပေးလုပ်သွားမယ့် ကိစ္စတွေကို မှာ အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ။ အဲဒုတိယမေးခွန်းကတော့ အခုအစိုးရကတော့ အန္တရာယ်ကြားက လည်ပတ်နေရတဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘယ်လောက်အထိ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ။ တတိယမေးခွန်းကတော့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ်နိုင်အောင် တကယ်ပဲ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေချထားသလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ဦးလွင်ကိုလတ် ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ပထမဆုံး ကျနော်တို့ပြောချင်တာက လက်ရှိ အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုဟာ သူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုယန္တယားတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လက်ရှိအခြေအနေထိ အုပ်ချုပ်ဖို့ Legitimacy မရှိ ထိုအတူပဲ. Capacity လည်းမရှိ ။ ဆွဲဆောင်နိုင်တာတွေလည်း မရှိတာ ကျနော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပြည်သူလူထု့အပေါ်မှာ Control မရှိဘူးဆိုတာ အစိုးရတရပ်ရဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အင်္ဂါရပ်ကို သူတို့မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူး။ ဒီလို Control မရှိဘူးဆိုတာ သူဖာသာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးကတည်းက ဒီနေ့အချိန်ထိ အားလုံးက ဒီအသစ်ယန္တယားမလည်ပတ်နိုင်အောင် ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တွန်းလှန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကကြတော့ ကျနော်တို့က နိုင်ငံတကာအဖွဲံ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးရာ ကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့အမြဲတန်းပြောဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိပြည်သူကိုအကာကွယ်ပေးရမဲ့ တပ်မတော်ဟာပြည်သူရဲ့ တရားဥပဒေထုထောင်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို အကာကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် သူကိုယ်တိုင်ကပဲ အကြမ်းဖက်ချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာ သိသိသာသာ ထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်ဆိုတာ ကျနော်တုိ့အမြဲတန်းပြောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတနည်းအားဖြစ် ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူလူထု့ကို ဒီလို အကြမ်းအုပ်စုကနေ အကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာ နိုင်ငံတကာသိအောင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေသိအောင် အမြဲတန်းပြောကြားနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ ကျနော်တို့ မဟာဗျူဟာတွေ ဘယ်လောက်ချမှတ်ထားသလဲဆိုတာ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ တချို့ဟာတွေကို ကျနော်တို့ ဒီမှာ ပြောလို့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် အားလုံးသိချင်ကြတဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျနော်တို့အချိန်တခုစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ပြင်ဆင်နေတာတွေအားလုံးကို ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရန်သူအတွက် ဒီစစ်ကောင်စီအတွက်လည်း ခြေလှမ်းပြင်ပြီလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ နိုင်ငဲံခြာရေးပေါ့ ။ တိုက်ပွဲတခု တိုက်နေတဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်း Legitimacyနဲ့ နိုင်ငံတကာ Legitimacy ပေါ့ တရားဝင်မှုကို အခြေခံတိုက်နေရတာ။ ပြည်တွင်း တရားဝင်မှုမှာတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ လက်ရှိရပ်တည်လှုပ်ရှားနေတာကို ကြည့်ရင်သိသာပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲ ဘယ်တုံးကနဲ့မှ မတူတာက ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ ဒီစစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို ဘယ်နိုင်ငံမှကမှ အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိဘူးဆိုတာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ Legitimacy နဲ့ပတ်သက်ရင် Defecto လည်းမရ Dejure မရပါဘူး။ ဒါဟာအရင်ရင် စစ်အုပ်စုတွေရခဲ့တာတောင် လက်ရှိအကြမ်းဖက်သူတွေမရခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့က တဖက်မှာ Legitimacy တိုက်ပွဲမှာ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တဖက်ကလည်း ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ Control ကိစ္စပါပဲ။ ကျနော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ နယ်မြေတွေကို ဘယ်လောက်အထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ ဒါက ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ ၁ ကတော့ ပြည်သူလူထု့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို မလည်ပတ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့နယ်မြေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ စနစ်တကျပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာဆိုတာကိုတော့ ပြောကြားနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ မဆုမြတ်မွန်ခင်ဗျာ။
မဆုမြတ်မွန် ။. ။အခုနကမေးထားသလိုပါပဲ။ အခုလက်ရှိဖွဲ့လိုက်တဲ့ အစိုးရက အန္တရာယ်ကြားက ဖွဲ့ရတာဆိုတော့ ဘယ်လောက်အထိ ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ထင်သလဲ။
ဦးရည်မွန် ။.။ ကျနော် အရေးကြီးတာတချက်ကိုလည်း ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ ဆရာတို့ ဆရာမတို့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်ပိုင်းက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပါဝင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းကို ကြည့်ပြီးလ်ိမ့်မယ် သိပြီးဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ရင်ကို ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဘယ်လောက်ထူးခြားသလဲဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တကယ်ထူးထူးခြားခြားကို ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တကယ်လည်း နာမည်နဲ့ညီတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ပြီးမှ ရှေ့ဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာပြည်တွင်းအင်အားအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာလည်း ကျနော်တို့ ကိုယ်အားကိုယ်လည်း ကိုးမှာဖြစ်သလို တပြိုင်တည်းမှာလည်း နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု ထောက်ခံမှု ကူညီမှုတွေကိုလည်း ရအောင်ကြိုစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တုံး က NCGUB နဲ့ ဘာခြားနားလဲဆိုရင် အင်မတန်သိသာတဲ့ ခြားနားချက်တခုကတော့ တရားဝင် ပြည်သူ အစိုးရလက်ကနေ စစ်ကောင်စီက စစ်အုပ်စုကနေ အာဏာလု့ယက်သွားတဲ့အခြေအနေပါ။ဒါကဘာကိုဖော်ပြသလဲဆိုရင် နိုင်ငံတကာ တရားဝင်မှု Legitimacy ကျနော်တို့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ Legitimacy လည်း ကျနော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှု ပြည်တွင်း Legitimacy လည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့ အခုလို အန္တရာယ်ကြားရှိနေတော့ ကျနော်တို့ ပိုပြီးတော့ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။
မစုမြတ်မွန်မေးမြန်းတာကို ဦးလွင်ကိုလတ်နဲ့ ဦးရည်မွန်တို့က ဖြေကြားခဲ့ကြတာပါ။
ပွညျတှငျး တိုငျးရငျးသားမဟာမိတျတှနေဲ့ ပေါငျးစပျပွီး နယျမွတှေကေို ထိနျးခြုပျနိုငျအောငျ စနဈတကြ ပွငျဆငျဆောငျရှကျနတေယျလို့ ဒီကနေ့ CRPH ကဖှဲ့လိုကျတဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့ ပွညျထဲရေးနဲ့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီးဌာနဝနျကွီး ဦးလှငျကိုလတျက ပွောပါတယျ။ နိုငျငံတကာ တရားဝငျမှု၊ ပွညျတှငျး တရားဝငျမှု ရှိထားတာကွောငျ့ ပိုပွီး ထိထိရောကျရောကျနဲ့ ဆောငျရှကျနိုငျတဲ့ အခွအေနရှေိတယျလို့ ကာကှယျရေးဝနျကွီး ဦးရညျမှနျကပွောပါတယျ။ NUG က ဒီကနလေု့ပျတဲ့ ပထမဆုံးသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ဗှီအိုအဝေိုငျးတျောသူ မစုမွတျမှနျက မေးမွနျးခဲ့တာကို နားဆငျရပါမယျ။
မဆုမွတျမှနျ ။. ။ အခု အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရဖှဲ့ လိုကျပွီဆိုတော့ ဒီအစိုးရ အဓိက ဦးစားပေးလုပျသှားမယျ့ ကိစ်စတှကေို မှာ အရငျဆုံးပွောပွပေးပါ။ အဲဒုတိယမေးခှနျးကတော့ အခုအစိုးရကတော့ အန်တရာယျကွားက လညျပတျနရေတဲ့အစိုးရဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ ဘယျလောကျအထိ ထိထိရောကျရောကျလုပျနိုငျမယျထငျပါသလဲ။ တတိယမေးခှနျးကတော့ စဈအာဏာသိမျးမှု အမွနျဆုံး အဆုံးသတျနိုငျအောငျ တကယျပဲ ထိထိရောကျရောကျလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှခေထြားသလဲဆိုတာသိခငျြပါတယျ။
ဦးလှငျကိုလတျ ။. ။ ဟုတျကဲ့ ပထမဆုံး ကနြျောတို့ပွောခငျြတာက လကျရှိ အာဏာသိမျး စဈအုပျစုဟာ သူရဲ့အုပျခြုပျမှုယန်တယားတညျဆောကျနိုငျဖို့ လကျရှိအခွအေနထေိ အုပျခြုပျဖို့ Legitimacy မရှိ ထိုအတူပဲ. Capacity လညျးမရှိ ။ ဆှဲဆောငျနိုငျတာတှလေညျး မရှိတာ ကနြျောတို့တှရေ့ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ပွညျသူလူထု့အပျေါမှာ Control မရှိဘူးဆိုတာ အစိုးရတရပျရဲ့ ရှိသငျ့တဲ့ အင်ျဂါရပျကို သူတို့မဆောငျရှကျနိုငျဘူး။ ဒီလို Control မရှိဘူးဆိုတာ သူဖာသာဖွဈတာမဟုတျပါဘူး။ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ အာဏာသိမျးခဲ့ပွီးကတညျးက ဒီနအေ့ခြိနျထိ အားလုံးက ဒီအသဈယန်တယားမလညျပတျနိုငျအောငျ ညီညီညှတျညှတျနဲ့ တှနျးလှနျဆောငျရှကျနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ အခုကကွတော့ ကနြျောတို့က နိုငျငံတကာအဖှဲံ့အစညျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အုပျခြုပျရေးရာ ကိစ်စတှကေို ကနြျောတို့အမွဲတနျးပွောဖွဈပါတယျ။ လကျရှိပွညျသူကိုအကာကှယျပေးရမဲ့ တပျမတျောဟာပွညျသူရဲ့ တရားဥပဒထေုထောငျရေးနဲ့ လုံခွုံရေးကို အကာကှယျမပေးနိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ သူကိုယျတိုငျကပဲ အကွမျးဖကျခြိုးဖောကျနတေယျဆိုတာ သိသိသာသာ ထငျထငျရှားရှားရှိတယျဆိုတာ ကနြျောတုိ့အမွဲတနျးပွောဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာတနညျးအားဖွဈ ဘာဖွဈနလေဲဆိုတော့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးနဲ့ ဆန်ဒပွနတေဲ့ ပွညျသူလူထု့ကို ဒီလို အကွမျးအုပျစုကနေ အကာကှယျပေးဖို့လိုအပျနပွေီဆိုတာ နိုငျငံတကာသိအောငျ ကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျးတှသေိအောငျ အမွဲတနျးပွောကွားနတေဲ့ကိစ်စဖွဈပါတယျ။
နောကျတခုကတော့ ကနြျောတို့ မဟာဗြူဟာတှေ ဘယျလောကျခမြှတျထားသလဲဆိုတာ ဒါနဲ့ပတျသကျလို့ တခြို့ဟာတှကေို ကနြျောတို့ ဒီမှာ ပွောလို့ရတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အားလုံးသိခငျြကွတဲ့ ကာကှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျတှနေဲ့ပတျသကျရငျ ကနြျောတို့အခြိနျတခုစောငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကနြျောတို့ပွငျဆငျနတောတှအေားလုံးကို ပွောလိုကျလို့ရှိရငျ ရနျသူအတှကျ ဒီစဈကောငျစီအတှကျလညျး ခွလှေမျးပွငျပွီလို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ပွောလို့ရတဲ့အပိုငျးမှာတော့ နိုငျငဲံခွာရေးပေါ့ ။ တိုကျပှဲတခု တိုကျနတေဲ့အခါမှာ ပွညျတှငျး Legitimacyနဲ့ နိုငျငံတကာ Legitimacy ပေါ့ တရားဝငျမှုကို အခွခေံတိုကျနရေတာ။ ပွညျတှငျး တရားဝငျမှုမှာတော့ ပွညျသူလူထုရဲ့ လကျရှိရပျတညျလှုပျရှားနတောကို ကွညျ့ရငျသိသာပါတယျ။ နိုငျငံတကာမှာလညျးပဲ ဘယျတုံးကနဲ့မှ မတူတာက ဒီနဒေီ့အခြိနျအထိ ဒီစဈအကွမျးဖကျအုပျစုကို ဘယျနိုငျငံမှကမှ အသိအမှတျပွုမှုမရှိဘူးဆိုတာ ကွညျ့မယျဆိုရငျ နိုငျငံတကာ Legitimacy နဲ့ပတျသကျရငျ Defecto လညျးမရ Dejure မရပါဘူး။ ဒါဟာအရငျရငျ စဈအုပျစုတှရေခဲ့တာတောငျ လကျရှိအကွမျးဖကျသူတှမေရခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့က တဖကျမှာ Legitimacy တိုကျပှဲမှာ နိုငျငံတကာမှာရှိတဲ့ ကနြျောတို့ရဲ့ မဟာမိတျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးတိုကျပှဲဝငျနတောဖွဈပါတယျ။ နောကျတဖကျကလညျး ကနြျောတို့ ပွညျတှငျးမှာရှိနတေဲ့ Control ကိစ်စပါပဲ။ ကနြျောတို့အစိုးရအဖှဲ့အနနေဲ့ နယျမွတှေကေို ဘယျလောကျအထိထိနျးခြုပျထားနိုငျအောငျ ကွိုးစားမလဲဆိုတဲ့ကိစ်စပါပဲ။ ဒါက ၂ ခကျြရှိပါတယျ။ ၁ ကတော့ ပွညျသူလူထု့ရဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ အုပျခြုပျရေးကို မလညျပတျအောငျလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ ပွညျတှငျးမှာရှိနတေဲ့ တိုငျးရငျးသားမဟာမိတျတှနေဲ့ ပေါငျးစပျပွီးတော့ ကနြျောတို့နယျမွတှေကေို ထိနျးခြုပျနိုငျအောငျ ကနြျောတို့ စနဈတကပြွငျဆငျဆောငျရှကျနတောဆိုတာကိုတော့ ပွောကွားနိုငျပါတယျ။ ကြေးဇူးပါ မဆုမွတျမှနျခငျဗြာ။
မဆုမွတျမှနျ ။. ။ အခုနကမေးထားသလိုပါပဲ။ အခုလကျရှိဖှဲ့လိုကျတဲ့ အစိုးရက အန်တရာယျကွားက ဖှဲ့ရတာဆိုတော့ ဘယျလောကျအထိ ထိထိရောကျရောကျဖွဈအောငျလုပျနိုငျမယျထငျသလဲ။
ဦးရညျမှနျ ။. ။ ကနြျော အရေးကွီးတာတခကျြကိုလညျး ကနြျောပွောခငျြပါတယျ။ ဆရာတို့ ဆရာမတို့လညျး ပွီးခဲ့တဲ့ အခြိနျပိုငျးက ထုတျပွနျလိုကျတဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ ပါဝငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြားစာရငျးကို ကွညျ့ပွီးလိမျ့မယျ သိပွီးဖွဈမယျလို့ ကနြျောမြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒီဖှဲ့စညျးပုံကိုကွညျ့ရငျကို ဒီအမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရက ဘယျလောကျထူးခွားသလဲဆိုတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ပွောမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့နိုငျငံသမိုငျးမှာ ပျေါပေါကျလာတဲ့ တကယျထူးထူးခွားခွားကို ပျေါပေါကျလာတဲ့ တကယျလညျး နာမညျနဲ့ညီတဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ ကနြျောတို့ အမြိုးသားညီညှတျရေးကို တညျဆောကျပွီးမှ ရှဆေ့ကျပွီး တိုကျပှဲဝငျသှားဖို့ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒါဟာပွညျတှငျးအငျအားအတှကျ အငျမတနျအရေးကွီးတယျလို့ မှတျယူပါတယျ။ တပွိုငျတညျးမှာလညျး ကနြျောတို့ ကိုယျအားကိုယျလညျး ကိုးမှာဖွဈသလို တပွိုငျတညျးမှာလညျး နိုငျငံတကာရဲ့ အသိအမှတျပွုမှု ထောကျခံမှု ကူညီမှုတှကေိုလညျး ရအောငျကွိုစားမှာဖွဈပါတယျ။ တခြိနျတုံး က NCGUB နဲ့ ဘာခွားနားလဲဆိုရငျ အငျမတနျသိသာတဲ့ ခွားနားခကျြတခုကတော့ တရားဝငျ ပွညျသူ အစိုးရလကျကနေ စဈကောငျစီက စဈအုပျစုကနေ အာဏာလု့ယကျသှားတဲ့အခွအေနပေါ။ ဒါကဘာကိုဖျောပွသလဲဆိုရငျ နိုငျငံတကာ တရားဝငျမှု Legitimacy ကနြျောတို့လကျထဲမှာရှိပါတယျ။ နိုငျငံတကာ Legitimacy လညျး ကနြျောတို့လကျထဲမှာရှိတယျ။ ပွညျသူလူထုထောကျခံမှု ပွညျတှငျး Legitimacy လညျး ရှိနတေယျဆိုတော့ အခုလို အန်တရာယျကွားရှိနတေော့ ကနြျောတို့ ပိုပွီးတော့ အားကောငျးကောငျးနဲ့ ထိထိရောကျရောကျဆောငျရှကျနိုငျတဲ့အခွအေနဖွေဈပါတယျလို့ကနြျောပွောခငျြပါတယျ။
မစုမွတျမှနျမေးမွနျးတာကို ဦးလှငျကိုလတျနဲ့ ဦးရညျမှနျတို့က ဖွကွေားခဲ့ကွတာပါ။